မြန်မာနိုင်ငံက ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်မှုမှာ အလွန်အားနေကြောင်း ပြသလိုက်တဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ ဖြစ်ရပ်… – ShweBo News
မြန်မာနိုင်ငံက ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်မှုမှာ အလွန်အားနေကြောင်း ပြသလိုက်တဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ ဖြစ်ရပ်…
Posted By: admin May 26, 2019
အရမ်းကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းခဲ့တဲ့ မိသားစုလေး အခုလို သေကွဲကွဲပြီး ပြိုကွဲရမယ်ဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးထားတဲ့အရာတစ်ခုပါ…
လေးနှစ်အရွယ် သားလေးအတွက် နောက်ထပ်မွေးချင်းတစ်ယောက်လောက် ထပ်မွေးပေးချင်ခဲ့တာ ကျွန်တော်တို့ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ ဆန္ဒပါ။ အဲဒီဆန္ဒကပဲ ကျွန်တော်ဇနီးကို သေတွင်းထဲ ပို့ခဲ့တဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ….
ဇနီးဖြစ်သူ ကိုယ်ဝန်ရပြီး လေးပတ်မှာ BFC က ဒေါက်တာမြပွင့်ဖြူနဲ့ ကိုယ်ဝန်အပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်က တစ်လခွာ ချိန်းခဲ့ပေမယ့် သင်္ကြန်တွင်းမှာ ဇနီးက သွေးဆင်းလာလိ်ု့ နှစ်ဆန်းနှစ်ရက်နေ့မှာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြန်ပြတဲ့အချိန်မှာတော့ ဗိုက်ထဲက ကလေးဟာ ငါးပတ်အရွယ်မှာ ရပ်နေပြီး သန္ဓမအောင်တော့ကြောင်းနဲ့ ခြစ်ပစ်ဖို့ပြောပါတယ်။
အဲဒါနဲ့ ၂၂.၀၄.၂၀၁၉ မှာ သားအိမ်ခြစ်ဖို့ Sakura ဆေးရုံးကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ညနေ ငါးနာရီမှာ ခွဲခန်းဝင်ခဲ့ပြီး ခြောက်နာရီမှာ ပြီးပါတယ်။ မေ့ဆေးအရှိန်ပြေအောင်နဲ့ စိတ်ချရမယ့် အနေထားဖြစ်အောင် Day Care ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မေ့ဆေးအရှိန်ပြေလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ ဗိုက်ထဲမှာ နာနေတယ်ဆိုတာနဲ့ အိမ်မှာနေတာထက် ဆေးရုံမှာဆို ပိုပြီးစိတ်ချရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ အဲဒီညမှာပဲ ဆေးရုံတက်မှတ်တမ်းလုပ်ပြီး ဆေးရုံတက်ခဲ့ပါတယ်(အဲဒီအတွေးက တကယ့်ကိုမှားယွင်းသွားတယ်ဆိုတာ နောက်မှနောင်တရခဲ့ရပါတယ်)။လူနာမှာလည်း အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဗိုက်နာတဲ့အရှိန်က ပိုလာသလို ဝမ်းဗိုက်ကြီးဟာလည်း ပိုပိုပူလာလို့ ပေကြိုးနဲ့ လာလာ တိုင်းကြရတဲ့အထိပါပဲ။ ကိုယ်တွေမှာလည်း ဆယ့်ငါးမိနစ်တစ်ကြိမ်လောက် ဆရာဝန်ပြေးခေါ်နေရပေမယ့် ဆရာဝန်တွေကတော့ OG ဆရာဝန်မကြီး သွင်းခိုင်းထားတဲ့ ဆေးသွင်းထားကြောင်းနဲ့ မနက်ရောက်ရင် ဆရာမကြီး ဒေါ်မြပွင့်ဖြူ လာမည်ဖြစ်ကြောင်းသာ တဖွဖွပြောပြီး ကျန်တဲ့ ကုသမှု ဘာမှမလုပ်ခဲ့ကြပါဘူး။
၂၃.၄.၁၉ မနက်ရှစ်နာရီမှာတော့ ဆရာဝန်မကြီး ဒေါ်မြပွင့်ဖြူ ရောက်လာပါတယ်။ သူ D&C လုပ်တာနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘဲ အစာအိမ်အူလမ်းကြောင်းမှာ ပြသနာဖြစ်နေတယ်ထင်ကြောင်းနဲ့ နေ့လည် ဆယ့်နှစ်နာရီမှာမှ မသက်သာရင် အူလမ်းကြောင်းဆရာဝန်နဲ့ လွှဲပေးမယ်ပြောခဲ့ပါတယ်။
နေ့လည် ဆယ့်နှစ်နာရီမှာတော့ ဒေါ်မြပွင့်ဖြူ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါတယ်။အူလမ်းကြောင်းဆရာဝန်ကိုခေါ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ဒေါက်တာလွှမ်းမိုးအောင်ကို ခေါ်ပေးပါယ်။နေ့လည် သုံးနာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ ဒေါက်တာလွှမ်းမိုးအောင်ရောက်လာပါတယ်။ဒေါက်တာလွှမ်းမိုးအောင်မှ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခိုင်းခဲ့ပြီး ဝမ်းဗိုက်အတွင်းမှာ အူ အစာအိမ် အူမကြီး တစ်ခုခုပေါက်နေကြောင်း အရည်တွေပြည့်နေကြောင်းနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အနှံ သွေးအဆိပ်များ ပြန့်နေပြီဖြစ်တာကြောင့် ချက်ချင်းခွဲရမည်၊ မခွဲခဲ့ပါက နောက်နေ့မကူးဟု ပြောကြားတာကြောင့် အရေးပေါ် ခွဲစိတ်ဖို့ သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ အရမ်းထိတ်လန့်သွားရပြီး ညထဲကသာ ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆို အခုလို သွေးအဆိပ်ပြန့်တာတို့ နောက်နေ့မကူးဘူးတို့ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်လောက်ဘူးလို့ ယူကြုံးမရ တွေးမိပါတယ်။
ခွဲစိတ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေချိန်အတွင်း လူနာက သွေးပေါင်ချိန်တွေ ဆက်တိုက်ကျဆင်းလာလို့ မေ့ဆေးပေးဖို့ အခက်ခဲရှိလာကြောင်းနဲ့ မေ့ဆေးပေးပြီးပါက ပြန်နိုးရန် အခြေနေနည်းပါးကြောင်း ထပ်မံအသိပေးလာခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း နည်းပါးလှတဲ့ အခွင့်အရေးအတွင်းကနေ လူနာပြန်လည်နိုးထလာပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်နေရန်အတွက် ခွဲစိတ်ဖို့ သဘောတူလိုက်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း ခွဲစိတ်မှုအတွက် ပြင်ဆင်နေချိန်မှာပဲ လူနာမှာ နှလုံးရပ်သွားခဲ့လို့ အရေးပေါ် ကုသမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ နှလုံးပုံမှန်ပြန်ခုန်ခဲ့သော်လည်း သွေးပေါင်ချိန် အရမ်းနည်းနေသေးတာကြောင့် ခွဲစိတ်မှုမပြုလုပ်တော့ဘဲ အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင် ICU တွင်သာ အရေးပေါ်ကုသမှု ခံယူဖို့ ဆရာဝန်တွေက ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။
၂၄.၀၄.၁၉ မနက်ခြောက်နာရီမှာ ဒေါက်တာလွှမ်းမိုးအောင်က လူနာသွေးပေါင်ချိန်တက်မလာတာကြောင့် ခွဲစိတ်မှုမလုပ်တော့ဘဲ ဗိုက်မှအပေါက်ဖောက်ပြီး အထဲမှအရည်များကို ထုတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ လူနာအတွက် အသက်ရှင်ရန်မှာလည်း ၁၀% သာရှိကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်ထဲမှ အရည်များကို ထုတ်ယူပြီးချိန်တွင် ထွက်လာတဲ့ အရည်ကို ကြည့်ပီး အူမကြီးပေါက်သွားတာဖြစ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ စကားပြောနေစဉ်အချိန်အတွင်းမှာပဲ လူနာမှာ နှလုံးထပ်မံရပ်သွားခဲ့ပြန်တာကြောင့် အရေးပေါ် ကုသခဲ့ရပြန်တယ်။ အချိန်မှာ မနက်ခြောက်နာရီခွဲ ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ လူနာမှာ ခပ်စိတ်စိတ်လေး နှလုံးခုန် ရပ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်ကို အားကိုးတကြီးမေးကြည့်ရာမှာတော့ ဆေးအရှိန်ကြောင့်သာ နှလုံးခုန်နေတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ မမျှော်လင့်တော့ရန်ပြောဆိုပါတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ ICU ထဲက တာဝန်ကျ ဆရာမတွေက လူနာနှလုံးရပ်သွားချိန်တွင် “ပြန်နိုးပေးရဦးမလား” ဟု လာလာမေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ လူနာရှင်ဆိုသည်မှာ မိမိလူနာအား နောက်ဆုံးအချိန်ထိ မျှော်လင့်မိနေမယ်ဆိုတာကတော့ ယုံမှားသံသယ ရှိစေရာမလိုပါဘူး။ ဒါကို ဆာကူရာမှ ဆရာဝန်မများက ဘာသဘောနဲ့ မေးမေးနေလဲတော့ မစဉ်းစားတတ်အောင်ပါပဲ။
မနက် ဆယ်နာရီလောက်မှာ ဒေါက်တာမြပွင့်ဖြူက ရနိုင်တဲ့ဘက်ကနေ ကြိုးစားတဲ့နေနဲ့ သွေးနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ ပါမောက္ခ ဆရာတစ်ဦးအား ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဆရာကြီးမှ လူနာအား ရနိုင်သမျှ ကယ်တင်မယ့် အကြောင်းနဲ့ စိတ်အေးအေးထားဖို့ အားပေးစကားပြောကြားပြီး အရေးပေါ် သွေးစစ်ဆေးမှုများ လုပ်ရန်ညွှန်ကြားပါတယ်။ သွေးစစ်ဖို့ လူနာကို သွေးဖောက်လိုက်တာနဲ့ နှလုံးခုန် တစ်ခါ ရပ်သွားပြန်ပါတယ်။ “ဪ ငါ့မိန်းမရယ် အသက်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေလိုက်ရတာ” ဆိုပြီး သူ့အပေါ် သနားလည်းသနား ဝမ်းလည်း အရမ်းနည်းရပါတယ်။ အဆုံးသတ်ရလဒ် ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ ထိုဆရာဝန်ကြီးကိုတော့ ဂရုစိုက် အားပေးမှုအတွက် ကျေးဇူးတင်နေမိတာတော့ အမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့် ပြီးမှ ပြန်တွေးမိတာက အဲ့လို သွေးတွေ ဘာတွေ စစ်ဖို့ လိုရင် ICU ထဲ စရောက်ကတည်းက ဘာလို့ ဒီလို လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ မလုပ်ခဲ့သလဲ??? D&C လုပ်ပြီးပြီးချင်းညမှာ မသက်သာလို့ ဆေးရုံကနေတောင် မပြန်နိုင်တဲ့ လူနာအပေါ် တစ်ခေါက်လောက်တောင် ပြန်လာကြည့်ဖို့ မလိုအပ်တာလား??? အချိန်လွန်မှ ထွန်ချသလိုပါလားလို့တွေးမိပါတယ်..
နေ့လည် တစ်နာရီမှာတော့ ကျွန်တော့်ဇနီး မအေးသန္တာဝင်းတစ်ယောက် လူ့လောကကြီးကို ကျောခိုင်းထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ သူအရမ်းချစ်တဲ့ သားလေးကို ထားခဲ့တာ ဒီနေ့တစ်လပြည့်ပါပြီ။
စာရင်းချုပ်ကြည့်လိုက်တော့ ဇနီးသည် ကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာ …
D&C လုပ်ပြီး ခွဲခန်းထဲက ထွက်လာပြီး အချိန်ကတည်းကဆိုရင် အချိန် တစ်ညလုံးရနေပါလျက်နဲ့ အနာကျင်ပျောက်ဆေး ထည့်ပေးတာကလွဲလို့ ဘာကုသမှု၊ ရောဂါရှာဖွေပေးမှု မလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆာကူရာဆေးရုံရဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့်လား ???
ဒီလိုအခြေနေမျိုးဟာ ဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကို သာမန် အတွေ့အကြုံနု ဆရာဝန်တွေတောင် သိနိုင်ပေမယ့် ဆေးရုံမှာ တာဝန်ကျဆရာဝန်တွေရဲ့ အကြောင်းရင်းမှန်ကို ရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ဖို့ နှောင့်နှေးခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့်လား ???
မိမိလူနာ အသည်းအသန်ဖြစ်နေတာတောင် ညတွင်းချင်း တစ်ခေါက်ပြန်လာကြည့်ပေးဖို့၊ ထိရောက်တဲ့ ညွှန်ကြားမှု၊ စမ်းသပ်မှု တွေ အချိန်မီ ပြုလုပ်ပေးဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့ OG ဒေါက်တာကြောင့်လား ???
နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ “ဆရာမကြီးဆီ ဖုန်းဆက်ထားပါတယ်”ဆိုတာကလွဲပြီး ရောဂါမရှာဖွေတတ်တဲ့ ဆာကူရာဆေးရုံရဲ့ တာဝန်ကျ ဆရာဝန်တွေကို ယုံကြည်အားကိုးမိတဲ့ မိမိကြောင့်လား ???
အားလုံးကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သလို ကိုယ်တိုင်အသက်မကယ်နိုင်လို့ အသက်ကယ်ပေးဖို့ ယုံကြည်စွာနဲ့ အသက်ကို ဝကွက်အပ်ခဲ့တာကို (လုပ်ပေးနိုင်တာရှိရင်) အချိန်နဲ့တပြေးညီ ကုသပေးဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့တဲ့ လူတစ်စုကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် သားလေးရဲ့မေမေ၊ ကျွန်တော့်ဇနီးကတော့ ကွယ်လွန်သွားရှာပါပြီ။ သူတို့တွေဖက်ကတော့ လူနာတစ်ယောက်ဆုံးသွားတယ်သာ ဖြစ်ပေမယ့် ကျွန်တော်နဲ့ သားလေးအတွက်ကတော့ ဘဝတစ်ခုလုံး ဗြောင်းဆန်သွားခဲ့ရတာပါ။
ကျွန်တော် ဒီဖြစ်စဉ်ကို တင်ပြရတာကတော့ သားအိမ်ခြစ်ရာကနေ ဒါမျိုး အသက်ပါတဲ့အထိ ဖြစ်တတ်တာကို အများပြည်သူ အသိရှိစေချင်လို့ပါ။ ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ကြရင်လည်း အခု ကျွန်တော့်လို ဆရာဝန်တွေပေါ် ယုံကြည်မှုထားပြီး သူတို့ ကုသစစ်ဆေးတာကို စောင့်နေမယ့်အစား ကိုယ်ကစပြီး ဓာတ်မှန်ရိုက်ပေးပါ၊ အထူးကုဆရာဝန်ခေါ်ပြီး စစ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုကြပါ။(တကယ်ပါ ကျွန်တော်သာကြိုသိခဲ့ရင် စဖြစ်တဲ့ ညထဲက ဓာတ်မှန်ရိုက်ဖို့ ဆေးစစ်ဖို့ တောင်းဆိုမိမှာပါ) အချိန်မီသာ သိခဲ့ရင် အခုလို အချိန်လွန် အခြေအနေဆိုးမှ ခွဲစိတ်ဖို့တောင် မမှီတော့တဲ့ အဖြစ်မျိုးက ကင်းဝေးကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အခုတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ ဆေးရုံပေါ်မှာ တစ်ချိန်လုံးရှိနေပါရဲ့နဲ့ ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို အချိန်မှီ မသိရ၊ ကုသမှုမရလိုက်တာကို တွေးလိုက်တိုင်းမှာ နာနာကြည်းကြည်း ရင်ကွဲမတတ် ခံစားရပါတယ်…
ကျွန်တော်ခံစားတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ဆိုးမျိုးကို နောက်လူများမခံစား မကြုံတွေ့ရအောင် တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်… လူအများသိနိုင်အောင်လည်း လွတ်လပ်စွာ ရှယ်ပေးခြင်းဖြင့် ကူညီပေးကြပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
Be the first to comment on "မြန်မာနိုင်ငံက ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်မှုမှာ အလွန်အားနေကြောင်း ပြသလိုက်တဲ့ ဝမ်းနည်းစရာ ဖြစ်ရပ်…"
မေလ၁၉ရက်နေ့က ထိုင်းနိူင်ငံဘန်ကောက်မြို့ လမ်းမပေါ်တွင် မြန်မာအမျိုးသမီးတစ်ဦး မွေးဖွားနေခဲ့ပြီး တိရစ္ဆာန်ကု ဆရာဝန်မလေးက ကယ်ဆယ်ခဲ့ခြင်း May 31, 2019
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သည့် ဘတ်(စ်)ကားသစ် များကို ပြည်ပပို့မည် May 28, 2019
ဝမ်းချုပ်​ခြင်း​၏ ​ကြောက်​စရာဆိုးကျိုးအသစ်​ May 28, 2019
ယောက်ျားမယူကြေးဆိုတဲ့ ခင်ဝင့်ဝါနဲ့ ဝိုင်းလေး May 27, 2019
ခေတ်သစ် မန်စီးတီး အသင်း (သို့မဟုတ်) နယူးကာဆယ် ရဲ့ တစ်ဆစ်ချိုးအပြောင်းအလဲ May 27, 2019
Cele Hot News (6)
Total visitors : 176,251
Total page view: 393,733